Wednesday, 04 October 2017 17:15
Ogummaafi ayyaana waggaa
Ayyaana waggaa ayyaantuutu arga akkuma jedhamu, namni akka amantiisaatti ayyaanaaf iddoo olaanaa kennuufi maatiisaa waliin kabajuu barbaadu ni qaba. Kanumarraa ka'uun yeroo baay'ee ijoolleen hojiif yookiin barnootaaf maatiisaanii irraa fagaatan akkasumas, kanneen bultoo dhaabbatanii jiran waggaatti si'a tokko gara bakka dhalootaafi maatiin isaanii jiraatan deemanii ayyaaneessuun baratameera.
Kanaafi, yeroo hunda wayitii ayyaanaa hanqinni geejibaa kan mul'atu. Haalli kun sammuu namaa keessatti miira gammachuu kan uumuufi dararaan kamiyyuu kan namatti hindhaga'amneef.
Haa ta'u malee taatee kana keessa kan darbu nama hunda jechuu miti. Sababa hojiitiin, hanqina maallaqaatiin, fageenya iddoofi sababoota birootiin utuu maatii waliin gammaduu barbaaduu kan qofaa yookiin namoota biroo waliin dabarsu danuudha.
Keessumaa ogeessonni fayyaa, poolisoonni, gaazexeessitoonni, artiistoonniifi ogeessonni biroo akka barbaadanitti yeroo ayyaanaa bakka fedhan deemanii ayyaaneffatan hinmul'atu. Namoonni ogummaawwan kanneenirratti bobba'an yeroo baay'ee ayyaanota hojiirratti dabarsu.
Weellistuu Iteenash Girmaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuun yommuu dubbisnee turre kan nuu mirkaneessite kanuma. “Yommuu ayyaanni waggaa ga'u ijoolleen isa nuti mana hinjirre yaaddee inuma dhiphatti. Garuu kun buddeena keenya waan ta'eef homaa gochuun hindanda'amu; Isaanis nutis itti barreerra” jettee turte.
Tibbana wayita dhimma hojiif gara Allaagee deemnetti miseensi poolisii nuti dubbisnes kanuma irra deebi'uun nuuf dhugoomsaniiru. Konistaabil Gammachuu Tulluu akka nutti himanitti, poolisiin ayyaana kan ayyaaneeffatu nageenya ummataa eegsisuuni. Ayyaana gammachuu qabu dabarseera kan jedhamus yommuu eegumsa milka'aa taasisuun ayyaanichi rakkoo tokko malee xumuramu ta'uu himu.
Yommuu gara ogummichaa dhufamutti, dirqamni nagaa kabachiisuu akka jiru waan hubatamuuf baay'een keenya dafnee amala hojichaa barra. Nagaa kabachiisuun hojii guyyuu waan ta'eef yeroo mara hawaasa tajaajiluu akka qabnu yaaduudhaan osoo nutti hindhaga'amiin guyyicha dabarsiina. Yeroo baay'ee gara jalqabaarratti kan rakkatu shamarrani malee dhiironni dafnee haala jiruun walbarra. Utuu haalli mijatee gallee ayyaaneffannee garuu hinjibbinu” jedhu.
Egaan ayyaana maatiifi firoota waliin walitti sassaabamanii ayyaaneffachuun daran kan nama gammachiisu ta'us, kan utuu haalli hinmijatiiniif hafee hojiirratti dabarsus bakkuma jirutti walitti ayyaaneffachuun misha.
Published in Hawaasummaa
Torban kana/This_Week 11184
Torban darbe/This_Month 97541
Guyyaa mara/All_Days 1435964